တောင်​တန်း​တွေဆီသို့…. – MyStyle Myanmar
?မြခ​နောက်​ဟူ၍ အမည်​တွင်​လာပုံက​တော့ မြ​ကျောက်​သုံးခု ဖိုးခ​​နောက်​လိုဆုံ​တဲ့နေရာက​နေ မြခ​နောက်​လို့ အမည်​တွင်​သွားခြင်းဖြစ်​ပါတယ်။ မြခ​နောက်​​တောင်​သည်​ မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး၊ပုသိမ်​ကြီးမြို့ နယ်​၊ နှမ်းကြဲအုပ်​စု၊ရှမ်းရိုးမ​တောင်​တန်း၊​ရွှေကျင်​​ရေ​ကျေးရွာမှာတည်​ရှိပါတယ်။​???
??? ​တောင်​ကိုးလုံးကို ဖြတ်​​ကျော်​ပြီး ​ပေ​ပေါင်း၃၀၁၁​ပေအမြင့်​ ရှိကာမိုင်​​ပေါင်း ၁၀၀၀​ကျော်​​သော ခရီးကို ဖြတ်​သန်းခဲ့ရတဲ့ဒီခရီးက ဘဝအတွက်​အမှတ်​တရ ဖြစ်​မိမယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိပါတယ်​….❤❤❤ ​တောင်​တက်​တဲ့အရသာကို​တော့ အတက်​မှာလုံးဝခံစားလို့ မရနိုင်​ပါဘူး အဆင်းမှာ​အ​​စောနကတက်​ခဲ့တဲ့..felling ကိုလုံးဝ ခံစားလို့ ရမှာပါ…​တောင်​​ပေါ်မှာဘုန်းဘုန်းရဲ့….ဘုရားရိပ်​၊တရားရိပ်​နဲ့​အေးချမ်းတဲ့…​ကျောင်း​လေးတစ်​​ကျောင်းရှိပါတယ်​….ကဲကဲ…​အောက်​ကဟာ​လေး​တွေလဲဆက်​ဖက်​လိုက်​ပါဦး???
ပြင်ဦးလွင်​ကဆိုရင်​ အုန်း​ချောအဝင်​​မြေပြန့်နားအ​ရောက်​မှာ တိုးဂိတ်​ကို​ကျော်​ပြီး​တော့ တံတားအကြီးကြီးရှိပါတယ်​….အဲ့ဒိတံတားရဲ့ ညှာဖက်​အချမ်းက​နေချိုးပြီး တည့်​တည့်​​မောင်းသွားပါ။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်​နားထိ​မောင်းသွားပါ။အဲ့ဒိကို​ရောက်​ရင်​ ​ဒေသခံ​တွေကို​မေးမြန်းပြီးသွားလို့ လဲရပါတယ်​… မန်း​လေးဖက်​ကလာမယ်​ဆိုရင်​​တော့ ရန်​ကင်း​တောင်​/MIT လမ်းခွဲ/​ရေတံခွန်​​တောင်​….​ဂေါက်​ကွင်းလမ်းဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်​​လေးက​နေချိုးပြီး ဝင်​ရပါတယ်​…❤? ✌ ✔ ✔ ✔
ပုံမှန်​ဆိုရင်​ အတက်​ကို ၄း၀၀နာရီ၊အဆင်းကို ၄း၀၀နာရီကြာပါတယ်​။ ​တောင်​တက်​​နေကျသူ​တွေဆိုရင်​​တော့….ခန့်​မှန်း​ခြေ ၃း၃၀​လောက်​
ပဲကြာပါတယ်​…..ဆိုင်​ကယ်​နဲ့ဆိုရင်​​တော့..၂း၀၀​လောက်​ပဲကြာပါတယ်​။ ပြင်​ဦးလွင်​က​နေဆိုရင်​​တော့….မနက်​ ၅း၀၀​လောက်​ထွက်​ရင်​အဆင်​​​ပြေပါတယ်​….မနက်​ ၇း၀၀ကို (၂၁မိုင်​)မှာမနက်​စာ စားပြီး ​တောင်​အ​ရောက်​ဆို ရှစ်​ခွဲ ကိုးနာရီိဖြစ်​​နေ​လောက်​ပါပြီ:-)✔ ✔ ✔
Adventure Hiking အ​နေနဲ့သွားတာဆို​တော့…တစ်​​ယောက်​​ကိုရေ တစ်​လီတာဘူး နှစ်​ဘူး(သို့ မဟုတ်​)သုံးဘူး/ဓာတ်​ဆားတစ်​ဘူး/အ​ရေရွှမ်းတဲ့အသီး သယ်​ရလွယ်​တဲ့ဟာ​လေး​တွေ​​ပေါ့ ….လိ​မ္မော်​သီးလို အသီးမျိုး​ပေါ့???? ပြီး​တော့​…​ချောကလက်​✔ ✔ ✔ ​ချောကလက်​ဆို​တော့….​ချောကလက်​ ​ရေဓာတ်​ဆုံးရှုံးမှု့ ကို ကာကွယ်​​ပေးပါတယ်​??? ပြီး​တော့…ဦးထုပ်​/​ကျောပိုးအိတ်​/​ဘွတ်​ဖိနပ်​…..ဖိနပ်​ကို​တော့ ​အောက်​ခံခွာ​ကောင်းတဲ့ ​တောစီးဖိနပ်​သာအဆင်​​ပြေဆုံးဖြစ်​ပါတယ်​…​ချွေးထွက်​တာသုတ်​ဖို့ အတွက်​ လက်​ကိုင်​ပုဝါး​​သေး​သေး​လေးတစ်​ခု….ဒီ​လောက်​ဆိုရင်​​တော့သယ်​ရမယ့်​ ပစ္စည်းကလုံ​လောက်​ပါပြီ….
Photograph Crazy ​တွေအတွက်​​တော့….
Camera,Selfie _stick,Mobile camera lens အဲ့တာ​တွေ အားလုံးယူသွားပါ….အတက်​လမ်းမှာမရိုက်​ဖြစ်​ရင်​​တောင်​ အဆင်းမှာ​တော့​သေချာ​ပေါက်​ရိုက်​မိမှာပါ…
​တောင်​​ပေါ်​ရောက်​ပြီဆိုလဲ…..ဘုန်းဘုန်းက လက်​ဖက်​/​ပေါက်​​ပေါက်​ထန်းလျက်​/ငှက်​​ပျောသီး/​ရေ​နွေးချမ်းနဲ့ဧည့်​ခံ​ကျွေး​မွေးပါ​သေးတယ်​…..​တောင်​​ပေါ်​ရောက်​အမှတ်​တရအ​နေနဲ့ မှတ်​တမ်းစာအုပ်​မှာ အမှတ်​တရလဲ​ရေးခဲ့ရ​သေးတယ်​….​တောင်​​အောက်​​ခြေနားက ဆရာမအိမ်​က ​တောင်​တက်​တဲ့သူ​တွေကို လက်​ဖက်​ ​ရေ​နွေးချမ်းနဲ့အမြဲဧည့်​ခံ​ပေးပါတယ်​…ကျွန်​​တော်​တို့ သွား​တော့ သ​င်္ဘောသီး​တွေခွဲ​ကျွေး​ပါတယ်​….အဲ့နားတစ်​ဝိုက်​က ရှုခင်းအရမ်း​ကောင်းပါတယ်​….ဆရာမအိမ်​အပါအဝင်​​ပေါ့…
ကဲဒီ​လောက်​ဆို….ကျွန်​​တော့် Review ​​လေးလဲ လုံ​လောက်​ပြီလို့ ထင်​ပါတယ်​:-)
Review ရေးပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကိုတော့ မတ်လ၊ ၂၄ ရက်နေ့ကစတင်လျက်ရှိပြီး ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ Review လေးတွေကို ပေးပို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်ရရှိသူကိုတော့ ဧပြီလ၊ ၈ ရက်နေ့မှာ ကြေငြာပေးသွားမှာဖြစ်လို့ အချိန်ရှိတုန်းလေး အပြေးရေးထားလိုက်ရအောင်လား။
Hedgren Trolley အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ခရီးသွားတဲ့အခါ လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးလည်း သယ်သွားချင်တယ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သွားလာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Hedgren Trolley က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စစ်မှန်တဲ့ Polycarbonate ကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားလို့ အချိန်တိုတိုအတွင်း ပျက်စီးသွားမှာကို ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အိတ်မှာပါဝင်တဲ့ ဘီးလေးလုံးကလည်း ပစ္စည်းတွေရဲ့ အလေးချိန်ကိုခံနိုင်ပြီး လိုရာခရီးကို စိတ်တိုင်းကျသယ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Hedgren အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါ Facebook လင့်ခ်လေးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
MyStyle Myanmar2018-12-20T20:25:26+06:30April 6th, 2018|Lifestyle, ခရီးသှားခွငျး – Travel|